फोटोले हजारौं कथा बोल्छ: उपराष्ट्रपति पुन
काठमाडौं, २० भदौ - फोटो पत्रकार क्लब नेपालको आयोजनामा भईरहेको फोटो प्रदर्शनीको चौथो दिन सोमवार नेपाल आर्ट काउन्सिलमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले फोटो प्रदर्शनी अवलोकन गरेका छन्।
स्वीट्जरल्यान्ड रोबोटले चिठी बाँड्ने
२० भदौ - स्वीट्जरल्याण्डका तीन सहर बर्न, कोनिज, र बिवेरिस्टमा यही महिनादेखि रोबोटले चिठी बाँड्ने भएको छ।
सामसुङले ग्यालेक्सी नोट ७ साट्ने
१७ भदौ - सामसुङले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी नोट ७ को बिक्री बन्द गरेको छ। सो स्मार्टफोनको ब्याट्री चार्ज गर्दा पड्किने समस्या देखिएपछि सामसुङले सो निर्णय गरेको हो।
भारतीय टेलिकम्पनी रिलायन्सको एउटा घोषणाले एयरटेललाई १२ हजार करोडको नोक्सानी
१६ भदौ - भारतीय कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिस लिमिटेडका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीले बिहीबार रिलायन्स जियो ४ जी सेवा शुभारम्भ गरेको घोषणा गर्नासाथ भारतको अर्को टेलिकम्पनी एयरटेलले १२ हजार करोडको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ।
सेप्टेम्बर ७ मा आउदैँ आइफोन-७
१४ भदौ - आइफोन ७ यही सेप्टेर ७ मा रिलिज हुने भएको छ। प्रविधि पत्रकारहरुलाई एप्पलले पठाएको निमन्त्रणामा सो मिति उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि नयाँ आइफोनका बारेमा कुनै जानकारी हालसम्म दिइएको छैन।
किन गर्‍यो आइफोनले अपरेटिङ सिस्टम अपग्रेड?
११ भदौ - आइफोनमाथि भएको आक्रमणपछि एप्पलले आफ्नो स्मार्टफोनको अपरेटिङ सिस्टम विश्वव्यापी रुपमा अपग्रेड गरेको छ। एप्पलको आइफोनमा रहेको कमजोरीमाथि प्रहार गर्दै एक अपरिचित स्पाइवेयरले मोबाइललाई सम्पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने कोशिस गरेको थियो।
साइबर आक्रमणका अगाडि एसियाली कम्पनी निरीह
काठमाडौँ ११ भदौ - एसियाली संगठनहरु साइबर आक्रमणका अगाडि कमजोर रहेको बताइएको छ। अमेरिकी सुरक्षा कम्पनी ‘म्यान्डियान्ट’ले एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।
सबैभन्दा ठूलो विमान दोस्रो परीक्षण उडानमै दुर्घटनाग्रस्त
९ भदौ - संसारकै सबैभन्दा लामो विमान एयरल्याण्डर १० दोस्रो परीक्षण उडानका क्रममा बुधबार दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनापछि विमानमा क्षति पुगेको जनाइएको छ।
अब तिब्बतको आफ्नै सर्च इञ्जिन
काठमाडौँ १३ भदौ - चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र तिब्बतको आफ्नै सर्च इञ्जिन सुरु भएको छ। योङ्जिम नामक उक्त सर्च इञ्जिनमा तिब्बती भाषामै धेरै शब्दको जटिल खोजी पनि गर्न सकिने जनाइएको छ।
सामसुङले नवीकृत स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने
६ भदौ - सामसुङले नवीकरण गरेका स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने भएको छ। अर्को वर्षसम्ममा उसले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।
उड्यो सबैभन्दा ठूलो जहाज
३ भदौ - विश्वको सबैभन्दा ठूलो हवाइजहाज एयरल्याण्डर १० ले पहिलो उडान सम्पन्न गरेको छ। बुधबार लण्डनको कार्डिंगटन एयरफिल्डमा सो उडान सम्पन्न भएको हो।
अमेरिकाले ‘डिएनएस’माथिको नियन्त्रण गुमाउदैँ
२ भदौ - अमेरिका इन्टरनेटको नामाकरण प्रणालीमाथिको आफ्नो नियन्त्रण समाप्त गर्न तयार भएको छ। इन्टरनेटको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण प्रणालीको रुपमा रहेको ‘डोमेन नेमिङ सिस्टम’ (डिएनएस)लाई उसले अर्को निकायलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो।
प्राकृतिक प्रकोपमा उपयोगी हुने रोवोट बन्यो
काठमाडौं २ भदौ - नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, भरतपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्राकृतिक प्रकोपमा जमिन तथा मानवनिर्मित संरचनाभित्र फसेका मानिसको उद्धारमा सहयोगी हुने रोबोट निर्माण गरेका छन्।
मान्छेको हस्तलिपि नक्कल गर्ने कम्प्युटर
३१ साउन - के कम्प्युटरले मान्छेले झैँ लेख्न सक्ला? ‘युनिभर्सिटी कलेज लण्डन’का अनुसन्धाताहरुले कम्प्युटरलाई मान्छेको हस्तलिपिको नक्कल गर्न सिकाएका छन्। उनीहरुले त्यस्तो अल्गोरिदम बनाएका छन्, जसले नमूना हस्तलिपि लिएर त्यही शैलीमा अन्य अक्षर लेख्न सक्छ।
दिमागी कसरतबाट पक्षघातको उपचार
२८ साउन - ‘भर्चुअल रियालिटी’का माध्यमबाट गरिने दिमागी कसरतले आंशिक रुपमा शारीरिक संवेदना र मांशपेसीमाथि नियन्त्रण फर्काएको छ।
भिडियो गेम खेल्ने विद्यार्थीको पढाइ राम्रो
२५ साउन - तपाइँ आफ्नो केटाकेटीलाई भिडियो गेम खेल्न रोक्नुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने तपाइँ गलत गर्दैहुनुहुन्छ। किनभने एक नयाँ अध्ययनमा भिडियो गेम खेल्ने किशोरकिशोरी पढाइमा पनि अब्बल हुने गरेको कुरा पत्ता लागेको छ।
एप्पलले दियो बराबर कामका लागि बराबर तलब
२४ साउन - अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पलले आफ्ना महिला र पुरुष कर्मचारीलाई बराबर तलब दिएको जनाएको छ।
अब फेसबुकले ‘क्लिकबेट्स’ कम गर्ने
२२ साउन - अब फेसबुकको न्युजफिडले मानिसहरुको ध्यानाकर्षण गराउन पोस्ट गरिने ‘क्लिकबेट्स’ देखाउन कम गर्ने भएको छ । बिहीबार फेसबुकले सो कुराको जानकारी गराएको हो।
‘ट्रान्जिट एलेभेटेड बस’को परीक्षण
१९ साउन - चीनमा टाङमुनिबाट अन्य वाहनहरु चल्न मिल्ने ‘ट्रान्जिट एलेभेटेड बस’ (टिइबी)को पहिलो पटक सडकमा परीक्षण गरिएको छ।
धेरै कमाउने प्रविधिमा स्मार्टफोन र क्लाउड बिजिनेस
१७ साउन - वर्तमानमा प्रविधिको क्षेत्रमा मोबाइल र क्लाउड आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेकाे जनाइएको छ । यी दुई क्षेत्रले ठूलाठूला कम्पनीहरुको धेरैजसो नाफाको भाग ओगटेको पाइएको हो ।
चालकविहीन सवारीले जन्मायो सामाजिक दुविधा
१५ साउन - चालकविहीन कारको कुरा गर्दा सुरक्षाको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ। मानौ‌, कुनै समय यस्ता कारले या त पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिनुपर्ने या गाडी दुर्घटनाग्रस्त हुने गरी अर्को दिशामा मोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कारका यात्रीको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था आयो भने के...
अब एसएमएसबाटै विपद् सम्बन्धी सूचना
काठमाडौँ १३ साउन - नेपाल टेलिकम र मौसम विज्ञान विभागबीच विपद् तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार मौसम सम्बन्धी सूचना मोबाइल एसएमएसमार्फत लक्षित क्षेत्रका सर्वसाधारणले निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
एप्पलले बेच्यो अरब आइफोन
१३ साउन - एप्पलले एक अरबौँ आइफोन बेचेको घोषणा गरेको छ । स्मार्टफोन बेच्न थालेको नौ वर्षपछि बुधबार एप्पलले सो घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौँ ७ साउन - होल्याण्डको फ्लोरिस स्कूनडर्बीक स्टुडियोले बोक्न मिल्ने बाथटब बनाएको छ। यो बाथटब पिकनिक जाँदा हातगोडा धुन र नुहाउन सहज हुने गरी बनाइएको छ।
पिरामिडमाथि सोलार इम्पल्स–२
६ साउन - करीब ४९ घण्टाको लगातारको यात्रापछि सो प्लेन स्पेनबाट इजिप्ट पुगेको थियो। सौर्य उर्जाबाट सञ्चालित यस प्लेनले अहिले नवीकरणीय उर्जा तथा ‘ग्रिन टेक्नोलोजी’ लाई प्रवर्धन गर्नका लागि विश्वपरिक्रमा गरिरहेको छ।
चन्द्रमामा मानिस पुगेको ४७ वर्ष
काठमाडौँ ५ साउन - चन्द्रमामा मानिसले पाइला टेकेको ४७ वर्ष पूरा भएको छ।
लेख्ने होइन त थ्रीडी कलमले
काठमाडौँ २८ असार - केही समयअघिसम्म थ्रीडी प्रिन्टिङको कुरो साइन्स फिक्सनजस्तै लाग्थ्यो । तर बितेको दशकमा थ्रीडी प्रिन्टिङ आम कुरा बन्यो । आजकल यसलाई सजावटी बबलदेखि लिएर चिकित्सकीय उपकरण तथा रोबोटका अंगहरु बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ ।
चीनमा थ्रिडी प्रिन्टेड मेरुदण्ड प्रत्यारोपण
चीन २६ असार - के तपाईंलाई मेरुदण्डमा कुनै समस्या छ? नआत्तिनुहोस्, अब कमजोर मेरुदण्डको ठाउँमा थ्रिडी प्रिन्टेड मेरुदण्ड प्रत्यारोपण गर्न सकिने भएको छ।
यात्रु बोक्ने पहिलो ड्रोन
२४ असार - मान्छेलाई बोक्ने संसारकै पहिलो ड्रोनले अमेरिकाको नेभाडामा यही वर्षको अन्ततिर परीक्षण उडान भर्न सक्ने जनाइएको छ । सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीका अनुसार ई–हांग होल्डिङ कम्पनी नामको कम्पनीले यस्तो तयारी थालेको हो।